Archives des Andramena - Midi Madagasikara
Manjakaray : Andramena dimy hita teo akaikin’ny Jovena Ambatomainty
Redaction Midi Madagasikara 28 février 2014 Ambatomainty, Andramena, Antananarivo, CIRGN, Jovena, Manjakaray, Zandarimaria
Teo akaikin’ny Jovena Ambatomainty Manjakaray no nahitana bolabolan’ andramena miisa dimy, ny alakamisy 26 febroary lasa teo. Antso avy amin’ny laharana 119 tamin’ny olona teny amin’ny manodidina moa no nahazoana ny vaovao. nidina teny an-toerana avy hatrany ny tao amin’ny Zandarimaria misahana an’Antananarivo renivohitra ka nalefa teny amin’ny CIRGN ireo andramena ireo. Raha ny fahitana…
Sambava : Andramena 298 ihany no navoaka tao amin’ny toby miaramila Ambolomadinika
Redaction Midi Madagasikara 13 février 2014 Ambolomadinika, Andramena, Antalaha, Huissier, Sambava
Araka ny tatitra nataon’ny “Huissier de Justice” eto Sambava dia nalaina ramatoa iray tompon’ andramena avy any Antalaha tamin’ny 24 janoary 2014 mba hanatanteraka ny didim-pitsarana N°493 nivoaka tamin’ny 04/06/2012. Nodidian’ny mpitsara ao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antalaha mantsy ny famoahana ireo andramena 298 voalaza ao anatin’ny “grosse” ireo. Tao amin’ny tobin’ny miaramila BLIG…